न्यूरोडको एक क्यामेरा पसलमाबाट जव १० लाख रुपैया लुटेर हिड्ने प्रहरी !!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/न्यूरोडको एक क्यामेरा पसलमाबाट जव १० लाख रुपैया लुटेर हिड्ने प्रहरी !!!
काठमाडौं । हामी समस्यामा पर्यौं भने सबैभन्दा पहिला सम्झने प्रहरीलाई नै हो ।जताको सेवाका लागि सरकारी तलब खाएर बस्ने प्रहरीनै जनता लु`ट्न था`ले भने के होला ? असार ७ गते दिउँसो ३ बजे न्यूरोडको एक क्यामेरा पसलमा त्यस्तै घटना भयो । हुन त यो घटना रहस्यमय भएको छ ।
घट`नाका अन्य पाटा पनि खुल्दै गएका छन् । तर क्यामेरा पसलका ब्यवसायीवाट १० लाख रुपैया लुटेर लैजाने दुई जना प्रहरी नै भएको प्रहरी अनुसन्धानवाटै पत्ता लाग्यो ।
न्युरोडमा क्यामेरा पसल संचालन गर्ने विकास अग्रवालले १७ लाख रुपैया बैंकवाट झिकेर ल्याएका थिए । उनले पैसा झि`केर ल्याएको थाहा पा`एका दुई जना दिउसो करिब ३ वजे उनको पसलमा पुगे अनि धम्क्याएर १० लाख रुपैया लिएर गए । मोटरसाइकलमा आएका दुई जनाले आफ्नो १० लाख रुपैया लगेको भन्दै उनले प्रहरीमा उजुरी दिए ।
उनले त्यो पैसा बुवाको शल्यकृया गर्न बैंकवाट निकालेको बताएका छन् । तर प्रहरी अनुस`न्धानमा उनी पनि हु`ण्डि ब्यापारी पनि भएको प्रारम्भिक कुरा खुलेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवामा उजुरी पुगेपछि भएको अनुसन्धानका क्रममा त्यसरी पैसा लुटेर लैजाने दुई प्रहरी कर्मचारी भएको खुलेको हो ।महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसएसपी दीपक थापाले सिसिटिभी क्यामेरा लगायतका माध्यमवाट गरेको अनुसन्धानमा मोटरसाइकलको नम्बर पत्ता लाग्यो । त्यो मोटरसाइकल कसको हो भनेर अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरी नै झसंग भयो ।